AirPods uye watchOS 7. Tinoziva nhau dzavo | Ndinobva mac
AirPods uye watchOS 7. Tinoziva nhau dzavo
Isu zvakare tine nzvimbo mune ino WWDC yeAirPods yekuvandudza. Zvichazove izvo kuti Studio nyowani haisi kuzoburitswa. Asi isu tine niche yemahedhifoni akachinja misika. Isu tinowanawo zvigadziriso zveiyo Apple wachi. watchOS 7 yave pamutemo uye inouya neimwe nhau yakanaka kwazvo uye yatokurukurwa kare mumakuhwa.
Mune ino WWDC inogadziridza maAirPod akaunzwa zvakare. Otomatiki switching inobvumira AirPods kufamba zvisina mushe pakati pemidziyo pasina kuchinjika nemaoko. Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti AirPods Pro ichave nenzvimbo odhiyo. Ndokunge, AKA yakatenderedza kurira. Inotsigira 5.1, 7.1 uye Dolby Atmos. Izvi zvinoreva kuti ruzha runoenderana pamwe nemafambiro atiri kuona mune bhaisikopo semuenzaniso, kana bhazi rako rikatendeuka kana ndege yakamonyororwa.
Yechokwadi chiitiko che kutenderera kurira, munda wenzwi unofanirwa kuramba wakagadziriswa kunyangwe musoro uchifambiswa. Kune izvo isu tine iyo yekuwedzera, yekutarisa kufamba kwemusoro, uye nenzira iyoyo inoitwazve nekumisazve nzvimbo yeruzha kuitira kuti igare yakasungirirwa kuchinhu chako kunyangwe kana musoro wako uchifamba.
watchOS 7 nenhau dzayo
Iine watchOS 7, zvishandiso zvinokwanisa kubvumidza akawanda matambudziko panguva imwe chete. isu tine Face Kugovana. Iyo huru ruzivo rweiyi nyowani vhezheni yeanoshanda system. Mawadhi echiso chewatch akagadzirwazve kuti asarudze matambudziko ave nyore.
Kudzidzira kutsva kunosanganisirwa Apple Watch. Iye zvino tava kukwanisa kuwana Dhani sekudzidzisa uye isu tichakwanisa kuyera kupuruzira uye macalorie isu atinoshandisa sezvatinoita mutambo wedu wepamoyo wekutamba. Iwe unogona zvakare kusarudza kubva kuwanda weakanyanya kujairika madhiraina. Iyo accelerometer uye gyroscope ichaziva kana iwe uri kutamba uine chete yepasi hafu, iyo yekumusoro hafu kana muviri wese. Zvakare, inoshanda simba kudzidziswa, kupora pasi nevamwe.
Pakupedzisira isu tine basa re tenderera nebhasikoro uye shandisa Mamepu paApple Watch iwe urikutowanawo madhairekisheni emabhasikoro. Ichasanganisira maficha senge manotsi ekudzikisira uye kuchovha bhasikoro.
Chinhu chitsva chinonzi Wind Down. Usati waenda kunorara, unogona kumisikidza usakanganisa mashandiro uye iyo Apple Watch inogona kuratidza zvinhu senge mimhanzi yakanyarara, chinja wachi kurara maitiro…; Iine watchOS 7, kana yave nguva yekumuka, zvinogona kuitwa nema alarm alarm kana Haptic alarm. Uye hongu, isu pakupedzisira tine yekurara yekutevera. Mukati meapp yehutano, sanganisira maonero ezvekufamba kwenguva
Chengetedza iyo coronavirus ne kugeza maoko kwakanaka, Zvichava nyore neWatchOS 7. Iyo Apple Watch inotizivisa isu otomatiki kugeza maoko edu uye kuona kuti inonyatsogeza nguvai. Unogona kushandisa odhiyo kusimbisa ruzha rwemvura inoyerera kana sipo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » AirPods uye watchOS 7. Tinoziva nhau dzavo
Chii chitsva muKeKKit uye nekuvandudza kune zvakavanzika marongero
Chii chitsva muPadOSOS 14 paWWDC